सौन्दर्य – Page4– rastriyakhabar.com
काठमाडौँ । सिजन मिडियाले पहिलो चोटी विवाहीत महिलाहरुलाई लक्षित गरि आयोजना गरेको लेट मि इन मिसेस ब्यूटी क्वीन नेपालको कार्यक्रम राष्ट्रिय नाचघर जमलमा सम्पर्न भएको छ । उक्त प्रतियोगीतात्मक कार्यक्रमको उपाधी सहभागी २५ जना प्रतियोगिलाई पछि पार्दै काठमाडौँ बूढानीलकण्ठकी सुदिक्षा आचार्य भट्टराईले..
भनिन्छ कि जुन काम ठूला ठूला लडाइँले गर्न सक्दैन, त्यो काम तपाईको एक मुस्कानले गर्न सक्छ । यो मुस्कान हाँसामोमा बद्लियो भने त कुरा नै अर्कै हुन्छ । हाँसो एक औषधि हो, जसका धेरै फाइदा छन् । तन–मनलाई निखार्नका लागि हाँसो सबैभन्दा उत्तम थेरापी हो । तपाईंले आफ्नो वरपर देख्नुभएकै होला केही व्यक्ति यस्ता..
बिवाहका शैली, मान्यता, संस्कार, प्रचलन भूगोल र समुदाय अनुसार भिन्न भिन्नै छ । यद्यपी दुई बिपपिरत लिंगी आपसमा बैवाहिक जीवनमा बाँधिन्छन् । जसको प्रचलन संसारभर छ । यो प्राकृतिक प्रकिया नै हो। बिवाह किन त ? यसमा भने सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । कसैले विवाहलाई सृष्टीको अनिवार्यता मान्छन् त कसैले स्वेच्छिक..
रश्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड ब्युटी केयरको १० औ बार्षिकोत्सव भव्यताको साथ सम्पन्न
नेपालको एक मात्र चर्चित ब्युटी पार्लर रश्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड ब्युटी केयरले आफ्नो १० औ बार्षिकोत्सब भव्यताको साथ मनाएको छ । रश्मिलाज फेसियल हाउस एण्ड ब्यूटी केयर एक मात्र अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्पूर्ण सुबिधासम्पन्न कम्पिलिट फेसियल हाउस एण्ड ब्यूटी केयर हो ग्राहकहरुको बिश्बास माया अनि काम..
शनिबार, पुस ८, २०७४ मा प्रकाशित
बरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ सविना भट्टराई भन्छिन्, ‘जाडोमा छालासम्बन्धि धेरै समस्या देखिने गरिएको छ । जस्तो कि, छाला फुस्रो हुने । चिलाउने । हात गोडा फुट्ने । छालाको पत्र निस्कने, अनुहारमा चाया पोतो आउने ।’ किन हुन्छ यस्तो ? डा. भट्टराईका अनुसार जाडो मौसममा वायुको आद्रता कम हुन्छ । यसले हावामा पानीको..